अचम्मको गाउँ जहाँ यस कारण युवतीलाइ हेर्न आउँछन् हजारौँ पर्यटक ! - Babal Khabar
Friday, December 3www.babalkhabar.com : For your kind information
अचम्मको गाउँ जहाँ यस कारण युवतीलाइ हेर्न आउँछन् हजारौँ पर्यटक !
November 16, 2021 by बबाल खबर
पर्यटन प्रवर्द्धनका अनेक तरिका हुँदा रहेछन् । एउटा गाउँ गाउँले महिलाहरुको लामो कपालका कारण पर्यटनको केन्द्र बनेको छ र त्यहाँ हरेक वर्ष झण्डै ८० हजार पर्यटक महिलाको लामो कपाल हेर्नकै लागि आउँछन् ।खबर हो चीनको ।
गुआंग्झी प्रान्तस्थित हुआन्गुलो गाउँ लामो कपाल भएका महिलाहरुको गाउँ हो । उक्त गाउँका ८० जना महिला यस्ता छन् जसको कपालको लम्बाई १.४ मिटर देखि २.२ मिटरसम्म छ ।
महिलाहरुको लामो कपालकै कारण यो गाउँ दुनियामा चर्चित छ । महिलाको कपाल हेर्नकै लागि वर्षेनी ८० हजार पर्यटक उक्त गाउँमा पुग्ने गरेका छन् ।
यी महिलाहरुलाई रेड याओ पनि भनिन्छ । महिलाहरु प्रायः रातो रङको कपडा लगाउँछन् । आफ्नो लामो कपाललाई लिएर महिलाहरु निकै गौरवान्वित हुन्छन् ।यो गाउँ दुनियाको सबैभन्दा लामो कपाल भएका महिला भएको गाउँ पनि हो र यसले गिनिज बुकमा आफ्नो नाम दर्ज गराइसकेको छ ।रोचक कुरा त के भने यो गाउँमा सन् १९८७ सम्म त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नो कपाललाई खुल्ला बाहिर देखाउँदैनथे ।
केवल महिलाले पति र आफ्ना छोराछोरीको अगाडि मात्र कपाल देखाउने चलन थियो । कपाल नुहाउँदा समेत निलो स्कार्फले छोपेर नुहाउने गर्थे । तर समय बदलिँदै गयो । कपाल छोप्ने परम्परा मात्र हटेन महिलाको त्यो कपाल गाउँको गौरव बनेको छ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Posted in रोचक, समाचार
Prevदैनिक दुईटा ओखर खानाले शरिरलाई मिल्छ यति धेरै नसोचेको फाइदा !
nextघरको छतबाट आवाज आइरहन्थ्यो: ६ महिनासम्म वास्तै गरिनन,६ महिनापछी हेर्दा दुनिया अचम्मित
महिला फुटबल टिममा पुरुष खेलाडी खेलेको भन्दै लैं’गि’क जाँचको माग!
के प्रियंकाले निक जोनससँग ‘डिभोर्स’ गर्दैछिन् ? बाहिरियो यस्तो रहस्य !
फेसबुकमा चिनजान भएर पहिलोपटक होटलमा पुर्यायो त्यसपछि……..
गायिका प्रविशा अधिकारीका श्रीमान अमेरिकामा के गर्छन ?
श्रीमान् अरु महिलासँग नसल्किउन् भनेर महिलाले अपनाउन थाले यस्ता नयाँ तरिका
श्रीमानको जब इच्छा हुन्छ तब अस्विकार गर्न सकिदैन …..
प्रेमिकासँग ‘किस’ माग्दा ब्वाईफ्रेन्ड जेल सम्म पुग्नुपर्यो ! कसरी ? जान्नुस
किन देखिन्छ यस्ता डरलाग्दा सपना ? यस्तो छ कारण
अाफ्नी प्रेमीकाको यस्तो अचम्मको बानी जब प्रेमीले थाहा पाए … प्रेमीको होस उड्यो !
यी महिला रुखसँग विवाह गर्दै, कारण जान्नु भयो भने पर्नुहुनेछ छक्क !
अन्धा प्रेमी पाउँदा खुशी महिला ! खुलाइन् चार फाइदा
फेसबुक खोल्ने बित्तिकै थप्पड हान्न कर्मचारी नियुक्त !
१६ वर्षमा पढाइ छोडेका यी व्यक्तिले एक वर्षमै यसरी कमाए ४५० करोड !
जब सैफ–करीनाको घरमा अपरिचित महिला प्रवेश गरिन्…
छोरीसँग बिहे गर्न लागेका ज्वाइँ आफूलाई मन परेपछि आमाले चालिन यस्तो कसैले बिश्वास नगर्ने चाल !
विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस !
महिलाका यी ७ अं’गमा पुरुष भुतुक्कै हुन्छन पुरूषहरू !
घरको छतबाट आवाज आइरहन्थ्यो: ६ महिनासम्म वास्तै गरिनन,६ महिनापछी हेर्दा दुनिया अचम्मित
दैनिक दुईटा ओखर खानाले शरिरलाई मिल्छ यति धेरै नसोचेको फाइदा !